नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपाभित्रको तीनवटा विचार समूहमध्ये आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
दुवै अध्यक्षले भेट्न बोलाउँदा जाने गरेको र उनीहरूलाई सुझाव दिने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमाटाले शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा गौतमको सन्देश लेख्दै गौतमले आफूलाई स्वतन्त्र राख्ने कोशिश गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘पार्टी अध्यक्ष भनेको केबल व्यक्ति मात्र हुँदैन, त्यो पार्टीभित्रको सर्वस्वीकार्य संस्था हो, त्यसै कारण पार्टी अध्यक्षहरू दुवै वा एक्लै उहाँहरूले बोलाउँदा मैले भेट्ने गरेको छु । मैले समय–समयमा भेट गरेका बेला क. ओलीकै अगाडि उहाँलाई गम्भीर आलोचना गर्ने गरेको छु । क. प्रचन्डलाई पनि उहाँकै अगाडि आलोचना गर्ने गरेको छु,’ गौतमले भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्ष दुवै वा एक्लैले बोलाएको बैठक वा भेलालाई मैले गुट मान्दिनँ । त्यसो भएर मलाई यो वा त्यो गुटसँग सम्बन्धित गराएर उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्छु ।'
उपाध्यक्ष गौतमले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नियुक्तिमा आफ्नो नाम जोडेर प्रचार गरिएकोमा पनि असहमति जनाएका छन् ।
हेर्नुहोस्, गौतमको खण्डन :
गलत मिडियाबाजीको खण्डन
१. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका सुशील भट्टलाई उक्त जिम्मेवारीका निम्ति मैले प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको र मेरै जोडमा उनी नियुक्त भएका हुन् भन्ने कपोलकल्पित तथा भ्रामक खबर सर्वत्र व्याप्त पारिएको छ । तर, सुशील भट्ट वा कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्तिका निम्ति मैले प्रधानमन्त्री वा कोही व्यक्तिसँग पनि केही भनेको छैन । यो मेरो सरोकार भन्दा बाहिरको विषय हो ।
२. अहिले हाम्रो पार्टीभित्र देखापरेका अन्तरविरोध हल हुन नसक्दा तीन वटा विचार समुह बनेका छन् । यी समुह संग क.केपी ओली, क.पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र क.माधवकुमार नेपाल जोडिनु भएको छ। म समूहगत रूपमा यी कसै संग जोडिएको छैन र जोडिन पनि चाहन्न। तर क ओली र क प्रचण्ड ले भेट्न बोलाउँदा म जाने गरेको छु। सल्लाह सुझाव र राय पनि दिने गरेको छु। मैले आफुलाई स्वतन्त्र राख्ने कोशिश पनि गरेको छु पछिल्लो मैले पार्टीमा राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव त्यसकै एउटा उदाहरण हो।
३. ‘पार्टी अध्यक्ष’ भनेको केवल व्यक्तिमात्र हुँदैन, त्यो पार्टीभित्रको सर्वस्वीकार्य संस्था हो । त्यसै कारण पार्टी अध्यक्षहरू दुवै वा एक्लै उहाँहरूले बोलाउँदा मैले भेट्ने गरेको छु। मैले समय–समयमा भेट गरेको वेला क. ओलीकै अगाडि उहाँलाई गम्भीर आलोचना गर्ने गरेको छु। क . प्रचण्डलाई पनि उहाँकै अगाडि उहाँको आलोचना गर्ने गरेको छु। पार्टी अध्यक्ष दुवै वा एक्लै बोलाएको बैठक वा भेलालाई मैले गुट मान्दैन । त्यसो भएर मलाई यो वा त्यो गुटसँग सम्बन्धित गराएर उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्छु।